भारतीय र श्रीलंकाभन्दा नेपाली बढी खुसी, वर्ल्ड ह्याप्पीनेस रिपोर्टमा नर्बे नम्बर वान  OnlineKhabar
भारतीय र श्रीलंकाभन्दा नेपाली बढी खुसी, वर्ल्ड ह्याप्पीनेस रिपोर्टमा नर्बे नम्बर वान
बिनासकारी भूकम्पको घाउ अझै निको भएको छैन । आर्थिक सुरक्षा खोज्दै बिदेशिने दर घटेको छैन । सामाजिक अपराध नियन्त्रण भएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता उस्तै छ । महंगी बढ्दो छ । तैपनि, नेपालीहरु त्यती निरास र दुखीः छैनन्, जति छिमेकी भारत छ ।
युनाइटेड नेसनका वल्र्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट-२०१७ ले त्यसै भन्छ । उक्त रिपोर्ट अनुसार विश्वको खुसी मुलुकमा नेपाल ९९ औं नम्बरमा छ । जबकी भारत १ सय २२ औं नम्बरमा छ । त्यस्तै अर्काे दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकलाई पनि नेपालले उछिनेको छ । श्रीलंका यो सूचीमा १ सय २० औं नम्बरमा छ । उत्तरी छिमेकी चीन भने हामीभन्दा बढी खुसी देखिए । रिपोर्टमा चीन ७९ औ नम्बरमा छ ।
जिज्ञासा उठ्न सक्छ, संसारकै सर्बाधिक खुसी देश कुन होला ?
जबाफ हो, नर्बे । उक्त रिपोर्टले नर्बेलाई विश्वकै सबैभन्दा खुसी देशमा सूचिकृत गरेको छ । यो अघिल्लो बर्ष चौथो नम्बरमा थियो । नर्बेले डेनमार्कलाई उछिन्दै पहिलो नम्बरमा उक्लिएको हो ।
के हो ह्याप्पीनेसको महत्व ?
वल्र्ड ह्याप्पीनेस रिपोर्ट २०१७ तयार गर्ने सस्टेनेबल डेभलोपमेन्ट सोल्युसन नेटवर्कका निर्देशक जेफरी एसका भन्छन्, ‘खुसी देश त्यो हो, जहाँ खुसीयाली, समाजमा भरोसा, समानता र सरकारप्रति बढी भरोसा छ । र, यि सबैमा राम्रो सन्तुलन छ ।’
प्रतिव्यत्ति जीडीपी अर्थात कुल घरेलु उत्पादन, राम्रो जीवनशैली, आयु, स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षा र सहयोग, उदारता, सरकार र व्यपारमा सून्य भ्रष्टचारको आधारमा त्यस देशको खुसी मापन गरिन्छ ।
नर्बे नम्बर वान
२०१२ यता डेनमार्क सबैभन्दा खुसी देशमा दरिएका थिए । र, धेरैजसो नर्बे नम्बर चारमा पथ्र्यो । यसपाली चाहि नर्बेले डेनमार्कलाई उछिनेको छ ।
रिपोर्टको अनुसार नर्बेले आफ्नो देशमा तेलको मूल्य कम भएपनि नम्बर वान स्थान हासिल गरेको हो । केवल तेलको सम्पतिले मात्र सबैभन्दा खुसी तुल्याएको होइन, उनीहरुले तेल कम मात्रामा उत्पादन गरिरहेको छ । तर, भविष्यका लागि उनीहरुले लगानी गरिरहेका छन् ।
नर्बेको मानिसहरुमा आपसी भरोसा छ । उनीहरु कुनै न कुनै उदेश्यका साथ काम गरिरहेका छन् । नर्बेका बासिन्दा उदार छन् । र, सरकार पनि राम्रो छ ।
कुन देशको मानिस सबैभन्दा बेखुस
सब-सहारा अफ्रिकामा पर्ने देश जस्तो कि सीरिया र यमन सबैभन्दा बेखुस देशमा दरिएका छन् । खुसीको तराजुमा उनीहरु सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् ।
चीनमा मानिस त्यती खुसी छैनन्, जति २५ बर्षअघि थिए
रिपोर्ट अनुसार चीनमा २५ बर्षअघि मानिस सबैभन्दा बढी खुसी थिए । १९९० देखि २००५ को बीचमा चीनमा मानिसहरुको खुसी हराउँदै गयो । यहाँ बेरोजगारी बढ्यो । सरकारको सुरक्षा कोष कम भयो ।
अमेरिका पनि त्यती खुसी छैन
२००७ मा अमेरिका तेस्रो नम्बरमा थियो । यसपाली भने १४ औं नम्बरमा झरेको छ ।
उत्कृष्ट १० खुसी देश
२०७३ चैत ७ गते २१:२१ मा प्रकाशित
अवैद्य रुपमा भित्र्याइएका कपडा नियन्त्रणमा लिदाँ ‘तस्कर’को अवरोध